Serivisy fandikana tenin-tanana sy fandikan-teny
Serivisy fandikana Rois
Betsaka ny zavatra hita eto. Ka mandania fotoana, mijery manodidina, ary ianaro izay rehetra tokony ho fantatra momba antsika. Manantena izahay fa mankafy ny tranokalanay ianareo ary maka fotoana fohy handefasana tsipika anay.
Hita manodidina ny famantaranandro izahay handika ny asanao
Manolotra serivisy 24hr ho an'ny asa maika izahay, mihodina ao anatin'ny 3 ora izahay amin'ny sarany fanompoana mazava.
ho an'ny dikanteny rehetra
Misy sarany farafahakeliny any an-toerana hatramin'ny 400 teny.
Ao amin'ny ROIS, tianay ny mihaino amin'ny mpanjifantsika, azafady aza misalasala mifandray aminay na mandefa hafatra aminay ary hiverina any aminao izahay.
Mikatona ny masoandro
© 2021 ROIS International Ltd. Namboarin'i Ogambo
Fanidiana nasionaly: mijanona ao an-trano Coronavirus (COVID ‑ 19) dia miparitaka haingana. Aza miala amin'ny tranonao raha tsy ilaina izany. Olona 1 amin'ny 3 izay voan'ny virus no tsy manana soritr'aretina, ka azonao atao ny manaparitaka azy nefa tsy fantatrao.